Wed, Feb 21, 2018 | 11:11:22 NST
16:32 PM (6 months ago)
जयबहादुर घर्ति / पाल्पा
प्रश्नः भिजिट भिसा कस्तो खालको भिसा हो ? यो भिसामा विदेश जानु कतिको उपयुक्त छ ?
उत्तरः जय जी, कुनै देशमा घुम्न जानका लागि लिइने भीसा भिजिट भिसा हो। भिजिट भिसा लिएर पर्यटकको हैसियतमा विभिन्न देशमा घुमघाम गर्न सकिन्छ। तर भिजिट भिसा गएर रोजगारी गर्न भने पाइन्न। कसैले भिजिट भिसामा पठाएर विदेशमा राम्रो काम पाइन्छ भन्दैछ भने बुझ्नुहोस् तपाईंलाई उसले ठग्न खोजिरहेको छ।